स्वास्थ्य/याैन « 24 news times
अहिले धेरैजसो बालबालिका चस्मा पहिरिएका देखिन्छन् । आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस् त, हिजोको पुस्ताले यतिविध्न चस्मा लगाएका थिए र ? पक्कै थिएनन् । भन्नुहोला, त्यसबेला चस्मै कहाँ पाइन्थ्यो र ?
किड्नी, पित्त थैलीमा भएको स्टोन निकाल्ने अचुक प्राकृतिक उपचार (विधिसहित)
किड्नी, पित्त थैलीमा भएको स्टोन निकाल्ने अचुक प्राकृतिक उपचार किड्नी अथवा पित्त थैलीमा हुने स्टोन बाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसको प्राकृतिक उपचार भिडियो सहित प्रस्तुत गरेका छौ र तपाइको स्टोन
के हाे थाइराइड र कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरू
काठमाडाैँ। थाइराइड भनेको एउटा ग्रन्थी हो । यो घाँटीको अघिल्लो भागमा रुद्रघण्टीको तल रहेको हुन्छ । यो ग्रन्थीले थाइरोक्सिन (टी–३) र ट्राइआयोडो थाइरोनीन (टी–४) हर्मोन उत्पादन गर्छ । थाइराइडको खास
यी हुन अाँप खानुका फाइदा – यो जानकारी नछुटाई पढ्नुहोला
आँप तपाई हामी धेरैलाई मन पर्ने फल हुनसक्छ । गर्मी महिनाको आगमनसँगै बजारमा आँप पनि देखिन थालेका छन् । तर, अहिले आएका आँप भने औषधी प्रयोग गरेको पकाइएका हुनाले ती